January 19, 2021 Xuseen 7
Puntlandtimes (Muqdisho)-Wasiirka warfaafinta xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe oo ka jawaabayey wararka sheegaya in ciidamo Soomaali ah lagu laayey Itoobiya ayaa sheegay inaysan jirin ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay waqooyiga dalka Ethiopia.
Wasiirka oo qiray inay jiraan ciidamo katirsan kuwa DFS oo ku sugan Eritrea ayaa sheegay in dadka wararka noocaas oo kale ah faafinaya ay ka so horjeedaan oo ay diidan yihiin in Soomaaliya ay yeelato ciidan xoog leh oo amaankeeda ay ku filnaato.
Warkaan ka soo yeeray wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli ay soo baxayeen wararka sheegaya in ciidamo Soomaaliyeed ka qaybgaleen dagaalada Itoobiya ayna shalay magaalada Galkacyo ka dheceen banaan baxyo lagu dalbanayo caddaynta halka ay qabteen askartii Soomaalida ee loo qaaday Eritrea.
Falaari gilgilasho kaagama hadho cadaymihii ayaa la hayaa oo idaacadihii tigreega ayaa soo bandhigaya dhacdadaas, waxa kaliya ee lagu qancayaa waxa weye inuu keeno caruurtii oo uu gatay ini farmaajo inuu soo celiyo iyagoo nabdoon, sheeko iyo huuhaa looma baahna meesha nafo biniadam ayaa maqan oo aan raqdooda iyo ruuxooda midna lahayn. tani waxay u muuqataa dhul gariir kale oo siyaasadeed oo ini farmaajo ku habsaday.
Ninkan hadlayaa waa microphone, waxba innagu ma war dhaamo, waxba ma oga
Ilaah been ha ka dhigo! Arrinta ciidankaa in aay beenowdo waxaay dan u tahay, qof kasta oo Soomaali ah oo aay dhibeeyso, dayaca dunida ku haaysta dhallintii Soomaaliya dhaxli lahayd!
Waay dhici kartaa in aay Tigreyga soo bandhigaan, Askar Soomaali ah oo aay qabteen, laakiin taasi kama dhigna in aay Soomaaliya ka yimaadeen. Laakiin waxaay noqon karaan, Ciidamo ka yimid Soomaalida Kililka.
Haddiise aay run tahay in aay dagaalka qayb ka yihiin ciidamo Soomaaliya ka yimid, wixii la qariyaba maalmo ayaay noqon doontaa, oo ninkii dhintay Qoyskiisa ayaa jawaab u baahan doono, kii noolna isagaaba hadli doono!
Yaase meel ku og qiyaastii 5 kun oo wiil oo xilliyadii Sh. Shariif iyo Xasan Sh. aay Emiratka aay Cadan Yemen ka dagaal geliyeen?!
Kuwaas oo aan anigu garanayo nin aay qaraabo ahaayeen, wiil Kabtan ah oo Cadan ka dagaal galay!
FG. Kursiga oo kali ah iyo ciddii markaa ku fadhida yaaysan noo muuqane, dadka dalkan dambiya ka galo ha lala xisaabtamo!
Dubbe haddii uu boqol goor inkaro ayaa ka dhegaysanaya. Waa maxay sababta wiilasha yaryar ee u badan ciidanka lugta ay u maqan yihii 8-9 bilood? Ma duuliyenimo bay baranayaan? Waxaan hubaa in wiil kasta oo Soomaali ah uu watay mobile phone; maxaa war looga waayey oo ay waalidkood ula soo xiriiri waayeen? Dabcan, telefoonnadii baa laga ururiyey ama kharash ay kusoo hadlaan bay waayeen.
Dhallinyaradaas badankood waxay ka yimaadeen qoysas danyar ah oo duruufta ayaa ku kalliftay askarnimada, waxaan lagu soo dabay in Qatar ama Turki loo dirayo.
Dubbe iyo golaha wasiirrada ee nacamleeyeyaasha ah ee aan haysan xorriyad ama dhiirranaan ay ra’yigooda ku dhiibtaan amase su’aalo ay hordhigaan shirarka golaha wasiirrada, cidna waxa ku hadlaan ee lasoo faray ma dhegaysanayso ee ha iska aamuseen.
Soomaali waa inay ogaataa ninka maanta kursiga Villa Somalia ku fadhiya waa Karzai-gii Afghanistaan oo kale. Farqiga u dhexeeyaa waa Karzai wuxuu ahaa nin aqoon leh oo xariif ah laakiin danayste ah. Farmaajo aqoon durugsanna maleh, caqlina majiro, aqoon diineed iyo qiyamna haba sheegin.
Dsgaal SHAANSHIYEEDKA joojiya DOORASHADII baa bilaa banaydee!
WAR DEGDEG AH: QM oo ergay gaar ah u magacawday USA si loo xalliyo shaqaaqooyinka ka dhashay natiijada doorashada ee dhowaaen la soo gabagabeeyey!!!!
Beenaale maantana muxuu lasoo shir tegey.beenaaale caruurtii aad xaabada Amxaarka ka dhigteen Raq iyo Nolol meel kusheeg Xayawaanyahow.
Kan ninka ka liita hore looma arag Shaadhkiisii wuxuu ku gubay 3bilood oo uuu u guulwadeeyo Armaajo NEEF.
Halagu Oriyo Beenaalahan Guulwadaha ah,Aw Aw Aw Aw Aw.
Wiilal dhalinyaro ayaa layiri tababar askarnimo ah xagaa iyo Eritrea, warkaan kale oo dhahaya dagaal kasocda waqooyiga Ethiopia ay xadka kala leedahay Eritrea ayaa lagu laayey mala xaqiijiyey, mise dad aanan waxba hubsan oo kujiraan siyaasiyiinta dadkooda aan uturyn, iyo war baahiyayaal ayaa waxaan wax kuraadinaya.kalsoonida dadka yaan laga lumin oo qalqal waalidiinta yaan lagalin, Faarax iyo Tafatirayayaasha kale hanaga xaqiijiyaan waalidiinta iyo inagaba warka laablakaca ay qorayaan. Waayo caruur tababar loogu qaaday ayaa umaqan warkooda ayey sugayaan. Tankale 100 million oo Ethiopian ku dadkoodu yihiin ma ciidan bey ka waayeen. caqliga wariyayaashuse xageebuu jiraa,siyaasi ga ma wuxuu u arkaa in hooyooyin dhibaateysan welwel iyo naxdin horleh ku ridideeda inuu mansab kugaarayo. Dadka iyo dalka unaxa qofkasta marbuu wax xakumaa kuma raagayo kursiga uu maanta kufadhiyo.waxaa caado dadka soomaliduba ha ubadnaatee war been ayeey sheegayaan warkii siduu usoo wareegay isagii ayuu waqti dambe maqlayaa, markaas ayuu leeyahay maxaa layiri. Waa beentii amahadlkiisii ayuu wali udhegtaagayaa. Waa qalad in waxaadan hubin aad qortaa si adeega bulshadaad uheysid u ahaado mid aduun iyo aaqiro ku anfaca
M/weyne Deni oo siweyn uga carooday weerarkii xalay safar deg deg ahna ku ah Boosaaso.